I-TaiG ithi ayizukuyeka ukusebenza ukumilisela enye i-jailbreak | IPhone iindaba
Abasebenzisi be-Pro-jailbreak bajonge ngenkxalabo yokuba azikho iindaba ezininzi malunga nokuqhekeka kwejele. Ngapha koko, khange sive malunga nokuqhekeka kwejele ukusukela nge-16 ka-Matshi xa uPangu wahlaziya isixhobo sayo sejele kwi-iOS 9.1, ukuqhekeka kwejele okwakhululwa kuphela kwiintsuku ezi-5 ngaphambili. Kodwa namhlanje sikuphathela iindaba zokuba, nangona ingachazi ukuba siza kusifumana nini isixhobo esilandelayo, inokusizolisa: I-TaiG iqinisekisile ukuba abayeki ukuzama.
Umntu ophetheyo wokuqinisekisa oku nguMncedisi we-3K, iqabane le-TaiG, ophendule imibuzo enxulumene nayo jailbreak ye-iOS 9.2.1. Impendulo yakhawuleza: "asizange siyeke." Kodwa nokuba ubuziwe malunga ne-iOS 9.2.1, akukho nto isenza sicinge ukuba baya kuyilungela loo nguqulo. Eyona nto inokwenzeka, ukuba bayaqhubeka nokusebenza, kukumilisela ukuqhekeka kwejele kuhlobo lwamva nje lwe-iOS, okwangoku eyi-iOS 9.3.2 kwaye akukho beta ekhoyo kuhlobo oluphezulu.
I-TaiG isasebenza ukwenza ukumiliselwa kwejele elandelayo
Nge WWDC 2016 kufutshane nekona, kunokwenzeka ukuba i-iOS 9.3.2 ibe luhlobo lwamva nje lwe-iOS kude kukhutshwe i-iOS 10, into eza kwenzeka, ukuba akukho zimanga, ngoSeptemba walo nyaka. Oku kunganika i-TaiG, iPangu okanye naliphi na elinye iqela elikhohlakeleyo elifuna ukulinika iinyanga ezi-4 ukuba zisebenze ngoxolo lwengqondo elibanika ukuba bangaqwalaseli naluphi na uhlobo lwexesha elizayo, njenge-iOS 9.3.3 beta (engakhange ikhutshwe kwaye ayikhangeleki ngathi iza kuphehlelela.)
Okwangoku singacebisa ukuvuselelwa kuhlobo lwamva nje lwe-iOS (iOS 5 ngonaphakade: ayinguwe 😉), kodwa Pangu Sele icebisile ukuvuselelwa kwi-iOS 9.2.x ngelo xesha kwaye iqela elinye labagculi babephethe ukumilisela ukuqhekeka kwejele kwi-iOS 9.1, ke kungcono ukuba wonke umntu azenzele ukubheja.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Jailbreak » I-TaiG ithi ayizukuyeka ukusebenza ukumilisela enye intolongo
UBobby dillon sitsho
Kulungile ukuba bahlala bezama ukufumana ukuqhekeka kwejele, nangona sele bethathe ixesha elide ... Ndicinga ukuba iqela labaphangi eliqeshwe ngu-Apple lithwala iziqhamo ... Nangona befumana i-jailbreak ndiqinisekile iya kuba kude kube yi-iOS 10
Phendula kuBobby Dillon
I-Jailbreak yokuba bebengayivalanga loo ndawo idibeneyo
Hayi ukungazi kukaThixo! Umdibaniso lowo ?? Hahaha
Lo inokuba ngumfanekiso wokuqala wokwenyani wecala le-iPhone 7